संगीत/कला समीक्षा | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 08/07/2011 - 17:53
केशव राज खनाल
मानव जन्मदेखि नै हरक्षण हर पल केही नयाँ कुरा देखिरहेको वा अनुभव गरिरहेको हुन्छ । यही अनुभव नै उसको जीवनमा सिकाइको अभ्यास पनि हो ।
उच्चकोटीका नेपाली दृश्यचित्र
kbs — Sun, 08/07/2011 - 17:17
प्रा. डा. सन्तोषमान मास्के
आधुनिक युगको नेपाली माटोमा जन्मी हुर्की पाश्चात्य शैलीमा नेपाली चित्रकलाको विधामा नयाँ आधुनिक स्रष्टा चन्द्रमानसिंह मास्के (वि.सं. १९५६-२०४१) लाकृतिहरू राष्ट्रिय धरोहरको रुपमा रहेका छन् ।
kbs — Tue, 07/26/2011 - 19:11
कलाकार कुलमानसिंह भण्डारीले जनआन्दोलनका विषयमा रचना गरी बनाएको चित्र (कला) प्रदर्शनीमा किन टाँगिएको थिएन ? अहिले पनि मेरा मनमा नबिर्सने छाप रहेको छ ।
किरात राईका मौलिक बाजाहरू
kbs — Sat, 05/14/2011 - 18:24
तीर्थराज मुकारुङ राई
प्राचिन जाति किरात राईहरू आफ्ना सम्पूर्ण संस्कार मुन्दुमद्धारा निर्देशित हुन्छ । मुन्दुम शास्त्र सङ्गीतबद्ध रूपमा प्रयोग हुनका साथै कतिपय अवसरमा बाद्ययन्त्रहरूको पनि प्रयोग भएको पाईन्छ । त्यसैले किरात राईहरू गीत, सङ्गीत तथा नृत्यमा आफूलाई सीपयुक्त प्रस्तुत गराउँछन् ।
kbs — Sat, 05/14/2011 - 18:21
चलचित्र जगतमा धार्मिक भावनाले प्रेरित भइ चलचित्र बनाउने चलन नयाँ हैन । नेपालमा भने त्यस्ता उदाहरणहरू थोरै मात्र छन् । यसै क्रममा "पटाचारा" चलचित्र सबैभन्दा नयाँ उदाहरणको रूपमा अगाडि आएको छ ।
kbs — Sun, 05/01/2011 - 12:04
डा. सवन जोशी
शास्त्रीयसङ्गीत १३ औं शताब्दीदेखि मुसलमान र हिन्दु संस्कृतिको सम्मिश्रणबाट विकसित हँुदै आएको उत्तर-भारतीय शास्त्रीयसङ्गीत जसलाई 'हिन्दुस्तानी शास्त्रीयसङ्गीत' पनि भन्ने गरिन्छ । हिन्दुस्तानी शास्त्रीयसङ्गीत भन्नाले सितार, सरोद, हार्मनियम, तबला आदि जस्ता बाजाहरू ।
kbs — Sat, 12/11/2010 - 20:49
मानव जीवन संगीतकै साथमा जन्मछ र संगीतकै साथमा अस्त पनि हुन्छ । धर्तीलाई स्पर्श गर्नासाथ बालक सर्वप्रथम रुन्छ । त्यो एक प्रकारको संगीत नै हो । मानिस मर्दा पनि रामनाम सत्य हो भन्ने महामन्त्र जप्दै दाहसंस्कारमा लगिन्छ । त्यो पनि संगीत नै हो । यी दुबै कुराले संगीतलाई सूत्रात्मक तवरले बाँधेको भने पाइन्न किनभने यसको आयाम वृहत् हुन्छ । आजसम्म संसारमा जन्मेका स्वस्थ बच्चा नरोई रहन सकेका छैनन् । त्यस्तै मृत्युसंस्कारमा संगीतको गुञ्जायमान नगरी अर्थीको दाहसंस्कार गरिएको पाइन्न । जीवन नै संगीतले बाँधिएको छ । कोइलीको सुरिलो र कोमल आवाजलाई मन पराएर नै उक्त पक्षीलाई सबैले मन पराएका हुन् । मयुर त सुन्दर पक्षी हो तर यसले आफ्नो सौन्दर्यताभन्दा उत्तम तवरले नृत्य देखाउँछ जसले सबैलाई चकित तुल्याएको हुन्छ । कोमल र सुरिलो स्वर भएका मानिसलाई सबैले मन पराउनुको तात्पर्य पनि संगीतकै हात भएकाले हो । खराव कुरा पनि मीठो भाकामा र स्वरमा भनियो भने मीठै लाग्दछ । यी सम्पूर्ण वास्तविकताहरुमा संगीतको लोकप्रियताको भूमिका छ । मानव सभ्यताको विकासपूर्व या नि मानव भाषाको विकास अघिदेखि नै संगीतको विकास भएको विचार विद्वान् मैक्समूलरको छ । यस कुरालाई काट्ने ठाउँ कतै छैन ।
हिन्दू संस्कारअनुसार नामाकरण, कर्णछेदन, मुन्डन, विद्यारम्भ, जनैधारण, विवाह, मृत्युसंस्कार आदि गरी जम्मा १६ संस्कार छन् । ती सबै संस्कारको शुरुवात र अन्त संगीतबाटै हुन्छ । हामी मनाउने त्यस्तो कुनै पर्व छैन जसमा संगीतको भूमिका नभएको होस् । दिनभरि कठोर श्रमले दिएको थकानलाई बाँसुरीको मीठो धुनले क्षणभरमै मेटाइदिन सक्छ । बालिनाली रोप्न शुरु गर्दा होस् या भित्र्याउँदा होस् संगीतकै आधार लिइन्छ । नाच्दै, गाउँदै, मन बहलाउँदै गरिएका कार्य शुभ हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई स्तापित गर्न समेत संगीतकै हात छ ।
संवेदनाको कङ्क्रिटमा उभिएर
kbs — Sat, 12/11/2010 - 20:23
मधुपर्क २०६७ मंसिर
जब म झ्यालबाट बाहिर चिहाउन खोज्छु, सिमेन्टका बाक्ला जङ्गलहरूमा ठोक्किएर दृष्टि आफैँतिर फर्किन्छन् । कुनै बेला यही राजधानीलाई भानुभक्तले 'अमरावती कान्तिपुरी नगरी' भनेर स्वर्गको पनि शिरमा राखेका थिए । आज यो अमरावती धूँवा, धूलो र अनेकन प्रदूषणभित्र निसास्सिएर क्षयरोगी भएको छ । मान्छे त छन्, त्यसैले यसलाई बस्ती नभन्नु सार्थक नहोला तर मानिसभित्रको संवेदना अब राजधानीले समाहित गर्न नसक्ने भएको छ । राजधानी अब मानिसको चेतना र भावनाबाट बिस्तारै पाषण स्वभावमा रूपान्तरित हुँदैछ ।
kbs — Fri, 11/05/2010 - 20:05
नव गीतकार मणिराज बस्नेतद्वारा लिखित तथा प्रस्तुत गीति-एल्बम "फाटेको मन " नेपालका हरेक बजारमा आउने तयारीमा छ । पृथक आवाजका धनी गायक शिव परियारले संगीत बद्ध गरेको यो एल्बममा बिभिन्न नयाँ पुराना गायकहरू लगायत शिव आफैंले पनि स्वर दिएका छन । गीतहरू प्राय:भावुक छन । गीतकार स्वयं परदेशमा रहेर परदेशको पीडा भोग्नु परेको कारणले यो एल्बममा प्राय गीतका शब्दहरू परदेशको भोगाइ, आफन्तसँगको बिछोडका घातहरू पोखिएको छ ।
एल्बमको शीर्ष गीत "फाटेको मन" शब्दमा संगीतकार स्वयंले स्वर दिएका छन । यो गीतको शब्द धोका, पीडा, र विह्वलताले सजिएको छ । शब्द अनुसार गीतको मेलोडीले पनि साथ दिएकै मान्न सकिन्छ । गीतकारको प्रथम प्रयास भएकोले कतिपय कमी कमजोरीमा चुक्नु पनि स्वभाविक हो । त्यस्तै गेरेर दोश्रो गीत "हरेक साँझ तिम्रो यादले सताउँछ यहाँ मलाई" शब्द पनि आफन्त या आफ्नी प्रियसीको सम्झनामा रचिएको आभाष हुन्छ । उक्त गीतमा पनि शिवकै आवाज सजिएको छ । एउटै संगीतकारको संगीत भएको कारणले होला पहिलो र दोश्रो गीतका धुन झन्डै एउटै र निरश नै सुनिन्छन ।
तेश्रो गीत भने अलिकति असहज झैँ लाग्दछ । शब्द पनि मीठो छ । धमेन्द्र सेवानको आवाजमा जादु त छँदैछ । तर एउटा सही समीक्षकको आँखाले हेर्ने हो भने गीतको शब्द भावले सबै स्वदेशी मनहरू बिदेश भासिएको गुनासो गरेको छ भने । गीतको लयले भने खुशी ब्यक्त गरेर खुशीयालीमा रमाउँदै गाएको आभाष हुन्छ । भन्नुको अर्थ संगीत आफ्नो ठाउँमा मीठो छ । शब्दले देशबाट बिदेशिएका युवाहरूप्रति बेदना पोखेको छ तर यी दुई शब्द र लयको तार्तम्य अलिक नमिलेको हो कि जस्तो महसुश हुन्छ । यो लयमा भने शब्द अलिकति जोश, जाँगर भरिएको अर्थात बिदेश छाडेर स्वदेश भित्रिएको खुशीयालीको शब्द भर्दा उत्तम लाग्ने थियो । अनी यो शब्दमा भने संगीत (लय) अलिक मार्मिक, भावुक र स्लो भएको भए गीत र संगीत अझ अब्बल दर्जाको हुने थियो ।
kbs — Sun, 10/31/2010 - 09:18
साहित्य र समाज एक अर्काका पूरक हुन् । त्यसैले साहित्यलाई समाजको दर्पण पनि भनिन्छ । संसारका जुनसुकै भाषामा पनि साहित्य र समाजबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । समाजबिना साहित्यको कल्पना गर्न सकिंदैन र साहित्यबिना पनि समाज अधुरो हुन्छ । समाजमा साहित्यले निकै ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । साहित्यका कथा, कविता, उपन्यास, निबन्धजस्तै नाटक विधाले समाजमा बेग्लै प्रकारको प्रभाव छोडेको पाइन्छ । नाटक साहित्यका अरु विधाभन्दा बेग्लै स्वरूपको हुन्छ । नाटक एक वर्णनात्मक कला हो, यसमा कथाको वर्णन हुन्छ, घटनाको वर्णन हुन्छ, परिवेशको वर्णन हुन्छ अनि यसमा पात्रको सम्पूर्ण जीवनको वर्णन हुने गर्दछ । नाटकको प्रभाव समाजमा चाडै नै पर्ने भएको हुनाले यसलाई साहित्यको सशक्त माध्यमका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । साहित्यका अरुविधा पठनीयमात्र हुन्छन्, हिजोआज तिनलाई पनि मञ्चनीय रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर नाटक पठनीय सँगसँगै मञ्चनीय पनि हुने गर्दछ । त्यसैले नाटकलाई श्रव्य र दृश्य दुवै काव्यका रूपमा लिईन्छ ।
सामाजिक जागरणकालागि होस् वा राजनैतिक विरोधका लागि, नाटकले राजनैतिक विषयवस्तुलाई समातेको हुन्छ । रुसको क्रान्तिसँगै राजनैतिक नाटकले गतिलिन थालेको देखिन्छ । राजनैतिक नाटक दलहरूकालागि जनमानस समक्ष सजिलै पुग्न सक्ने सशक्त माध्यम भएकोले यसलाई दलहरूको सांस्कृतिक हतियार पनि भनिन्छ । विरोधका लागि जनसभामा प्रस्तुत हुने राजनैतिक नाटककले रुसमा राम्रो छाप छोडेपछि यसको प्रभाव युरोप अमेरिकामा पनि पर्न थाल्यो । अनि बिस्तारै बिस्तारै सम्पूर्ण विश्वमा राजनैतिक नाटकको विभिन्न रूपहरू देखापर्न थालेको पाइन्छ । राजनैतिक नाटकले समाजको अतीतका विसंगतिपूर्ण पाटाहरुलाई वर्तमानको खुला र व्यक्ति स्वतन्त्रताबीच भिन्नता देखाएर मानवीय अधिकारबाट बञ्चित समुदायलाई आफ्नो हकका लागि मुठ्ठी कस्न प्रेरित पनि गराउछ । राजनैतिक नाटककै रूपमा सडक नाटकको पनि जन्म भएको मानिन्छ । सडक नाटक भन्नुनै राजनैतिक नाटक हो र सडक नाटकले राजनैतिक विचारलाई मुखारित गरिरहेको हुन्छ ।
kbs — Sat, 10/30/2010 - 13:41
हास्य र व्यंग्य भनेको जेरी र स्वारी जस्तै हो । स्वारी मात्रै देख्यो भने जेरीको याद आइहाल्छ, जेरी मात्रै देख्यो भने स्वारीको याद आउँछ । हास्य र व्यंग्य भनेको अलिअलि हामी 'मह' जोडी जस्तै पनि हो, मदन कृष्णलाई एक्लै देख्यो भने हरिवंश खै त भनेर सोधिहाल्छन्, हरिवंशलाई एक्लै देख्यो भने जोडी किन छुटेर हिँडेको भन्छन् । हास्यव्यंग्यको जोडीचाहिँ आजकल नेपालमा सँगै हिँडेको देख्नै छाडिसक्यो, जताततै व्यंग्य व्यंग्य मात्र देखिन्छ, हास्यचाहिँ कतै देखिँदैन ।
यक्ष प्रश्न मैमाथि
kbs — Sat, 08/14/2010 - 20:42
मधुपर्क २०६७ साउन
'कलाले वास्तविकताको पुनरुत्पादन गर्छ र विचारलाई बढी सम्प्रेषणीय बनाउँछ’ सायद बढी भनिएको र धेरै सम्झिएको भनाइ हो यो । कलाको बारेमा प्रत्येक हप्ताजस्तो मैले केही न केही लेख्नैपर्छ, खासगरी नेपाली कलाको बारेमा । माध्यम, शैली, इतिहास, गतिविधि, आन्दोलन, मोड, दावी, नयाँपन । यो केही विषय हुन् लेखनका । थपमा कलाबाट बचाइ र दिगोपन, सरकारी दृष्टि र सहयोग, पुरस्कार, सम्मान र सामाजिक रूपान्तरणमा कलाको भूमिका र यस्तैयस्तै कैंयन विषयहरू ।
कायम रहेन जता माया उतै नजर
kbs — Sat, 06/26/2010 - 21:15
बेनीको बजार गीति सङ्कथनमा एउटी युवतीको आत्मगत प्रस्तुति छ । यसमा विशिष्ट लयले युवतीको संवेगात्मक स्थितिलाई प्रखर बनाएको छ । यस संकथनकी समाख्याता युवतीको आत्मकथनबाट सामाजिक जटिलतामा जेलिएको पारिवारिक द्वन्द्वको अवस्था उद्घाटित भएको छ ।
kbs — Sun, 04/11/2010 - 16:05
आधुनिक नेपाली सङ्गीतको विकासमा रेडियो नेपालले जुन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यो हिजोआज ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको छ । वास्तवमा स्थापनाकालदेखि नै रेडियो नेपालले आधुनिक, लोक, शास्त्रीय, स्वदेश गान तथा भक्ति-सङ्गीत रेकर्डका साथै प्रसारणमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ ।
kbs — Sat, 01/02/2010 - 16:36
सा, रे, ग, म. प, ध, नि. सा, सङ्गीतका यिनै सात सुरबाट संयोजन पश्चात् निकालिने आवाज । ध्वनिबाट विभिन्न रागहरूको निर्माण गरिएको कुरा सामवेदमा प्रस्तुत गरिएको भेटिन्छ ।
सम्झना : भीम विराग
गजल :डरलाग्छ मलाई छेउमा बस्न न आउ है !!
तिम्ले साथ दिन्छ्यौ भने
एउटा अनौठो कथा
विकृतीको रुपमा मौलाउँदैछन् 'भ्यालेन्टाइन डे' अर्थात् प्रेम दिवस
तीन मुक्तक (आँखा सन्काई, मन चोरी, माग्न तिम्रो)
हिल्यै नमेटिने दाग छ
मलेसिया श्रम कि सेक्स ? (कथा)
गनगने दाई (लघु कथा )
आँशु पुछी तिमी मलाई हाँस्न सिकाऊ
समाज सुधारक मंगलमान
ढुङ्गालाई देवता ठान्ने
भाषाका पदवाक्यको अध्ययन
अँधेरो सरी लाग्दथ्यो जिन्दगानी